Inqabakutholwa yomsungulibhizinisi waseMsunduzi – Msunduzi News
Kuhlale kuthiwa imikhiqizo emisha edayisayo nesethubeni elihle lokuthengwa nokusetshenziswa yileyo esunguleka ngenxa yokudideka umuntu efuna ukwanelisa noma ukuhlenga isimo somthengi. Singabonisa ngendlela uRichard Branson nabanye abazizwa ngayo bethi bafanelwe ngokungcono ngokwamava nangokwezinsizakalo bengabathengi kunalokhu abakutholayo ezimakethe zezokundiza zangaleso sikhathi. I-Airline Virgin yasunguleka ngenxa yesidingo nokudideka uBranson akuthola. Esinye sezibonelo ezifanayo singabala imikhiqizo kaSteve Job okuyi-iMac, yi-iPhone ne-iPad.
Ngesikhathi uNonhlanhla Mthethwa wasePietermaritzburg ethola umntwana wentombazana, wayefuna usana lwakhe ludlale ngonodoli ofanayo nengane yakhe njengoba wayefuna ukugxilisa ukuzigqaja nokuzithanda kuyo njengengane yomAfrika. Ngesikhathi ama-Afrika efuna ukuzithola ngokwemvelaphi yawo, kwakusemqoka kuNkosazane yakwaMthethwa ukuthi indodakazi yakhe iyavikeleka ekuhlukumezekeni kokungaziqondi kuleli lizwekazi ebelikhungethwe wukuqonelwa ngokobukoloni.
Wabe esesungula ibhizinisi elincane ngokuhlanganyela noNks uLuleka Nzimande, okungumngani wakhe odabuka eRichmond. Inkampani yabo yaqala ngezinhlobo ezintathu zonodoli, enye yabo kuwuBaby Thando okungonodoli abangamaAfrika.
“Wakhiwe (unodoli uBaby Thando) ngomfanekiso womuntu ongum-Afrika ukuze amantombazanyana adlale ngonodoli abafana nawo. Kumqoka ukuqinisekisa ukuthi libunjwe liseva ukuze amantombazanyana abone ukuthi mahle ngesikhumba sawo semvelo, ngezinwele ezingayephuzeli futhi abalulekile nokuthi kunomuntu owusebenzisa isikhathi sakhe enza onodoli abafana nabo,” kusho uMaMthethwa.
Wabuye wazisa ngentshisekelo anayo yokuthi onodoli laba bakhiqizwe eMsunduzi, okwamanje okungenjalo. Lokhu kokukhiqiza onodoli eMsunduzi uthi kuyoba ngumalamulela esimweni sokungaqasheki nokuswelakala kwamakhono, ikakhulukazi entsheni yendawo’. Nokho, usheshe wengeza ngokuthi uma lokhu kuzokwenzeka, uxhaso lwezimali nolunye usizo oluqhamuka edolobheni lumqoka.
“Sifisa ukubeka idolobha indawo yethu ebalazweni, yaziwe njengabakhiqizi bokuhle eNingizimu Afrika,” engeza.
Lawa makhosazane womabili aba yingxenye yomkhankaso weBhange iStandard wokusiza osomabhizinisi baseNingizimu Afrika abazisebenzela kude nehlo lomphakathi ukuba baphendule amabhizinisi abo abe semehlweni omphakathi futhi aphumelele. Lo mkhankaso unikwe okutholakala embhalweni isihloko esithi: My Fearless Next kanti wamzuzisa isamba esiyisigidi samarandi (R1m) emncintiswaneni owawunzima. Sebeqokwe emincintiswaneni eminingana lapho baze bafika esigabeni samanqamu kuGagasi Shero Awards.
UMnu uCleo Zwane oyiMeneja Enkulu Kwezokukhangisa eStandard Bank uthe abawuvali umlomo ngalo mkhankaso, bebona okungale kwabebekulindele.
“Samangaliswa yizinga eliphezulu labafaka izicelo kwasithokozisa ukunikeza umklomelo kuNonhlanhla Mthethwa, ukuze akwazi ukuqhuba ibhizinisi lakhe ngaphandle kokwesaba,” ephetha.
Ngabe ungumnikazi webhizinisi elisafufusa onodaba oluhle ongalwethula ukuze uvuse ugqozi kwabanye? Thumela udaba lwakho futhi lungashicilelwa kula makhasi akhishwa njalo emva kwamasonto amabili.
Previous post: UMsunduzi isithako esimqoka ebholeni lakuleli
Next post: Olwemfucuza kalwehli kahle kuMasipala uMsunduzi